Ebe data si akwado (ndị na - enye nri ala na ụlọ) - Blog Real Estate Blog - realtyWW:
Ndị na - akwado data sitere na (ndị na - enye ụlọ na - azụ ihe oriri)
April 21, 2019 by ezigboWW, Mkpokọta echiche:
Ọ bụrụ na ịkwesịrị ịmepụta ndepụta data iji ọrụ syndication gị, ị nwere ike ịrịọ otu n'ime ụlọ ọrụ ndị a ka ịmepụta ya maka gị:
XML2U ntanetị, ntanetị, vetikal, social media, ngwa ọdịnala na nyiwe ahịa ndị ọzọ na-anabata ka nri karịa ka nri ndị ọzọ. Ingchọta oge ịgbakwunye ndepụta gị na nyiwe ọtụtụ ahịa, abụrụla ezigbo nsogbu.
Ngwọta ya bụ ndepụta data sitere na XML2U. Otu nri bụ naanị ihe ị ga-achọ. Naanị lee ụfọdụ n'ime 1000 + nyiwe ahia ahia ị nwere ike inye ya nri.
Anyị RealBird Ndepụta ọrụ ndị na-ebi akwụkwọ na-ewe ahịa, yana ịre ahịa dị iche iche ma na-eduga ọgbọ otu nnukwu ọganihu site na teknụzụ weebụ “ọkọlọtọ” Egwuregwu anyị na-eme ka ndị ọkachamara na-ahụ maka ụlọ na-enweta mkpughe kachasị maka ndepụta ha site na akpaka lọ ahịa na-edepụta ụlọ ikpo okwu, websaịtị ihe onwunwe, ndepụta na wijetị, ahịa Facebook, ahịa ederede ederede SMS na QR code based mobile mobile na nkwukọrịta a na-ewu ma na-edu akụrụngwa.
IDX Broker na-enyocha iji nakọta, hazie ma dozie ndepụta MLS nke mpaghara gị, na-enye gị ohere igosipụta Njirimara MLS n'enweghị nsogbu na saịtị ụlọ gị. IDX (Ntanetị Data )ntanetị) na-enye ohere ka ndị na-ere ahịa na ndị na-ere ahịa nweta ma gosipụta ozi ndepụta MLS na weebụsaịtị ha. A makwaara dị ka Broker Reciprocity, okwu ahụ bụ "IDX" na-ezo aka na ngwanrọ, iwu na ụkpụrụ nke na-enye ohere iji MLS data gosipụta na saịtị gị. Nri data a tumadi data edepụtara maka Njirimara abanye na sistemụ MLS, ebe iwu IDX nwere ike ikpebi ebe, ihe, na otu esi egosipụta ya. Ọ bụrụ na MLS gị na-enye ohere ịbanye na ntanetịime data a, ịnwere ike iji ya iji kwalite ndepụta niile tozuru etozu na weebụsaịtị gị, ọ bụghị naanị ndepụta edepụtara.
IndiaMLS Emebegola iji kwado ndị ọkachamara ala na ụlọ ike na ịkwado imekọ ihe ọnụ na imechi azụmahịa ngwa ahịa site na ngwa sọftụwia ọgbara ọhụrụ. N'ime ime nke a, anyị na-enyere ndị ahịa aka ahịa / ndị na-ere ahịa aka iwelie arụmọrụ ha, arụmọrụ na ikike ha nwere, yana ichekwa ikike ibe ha.
Ndepụta nke India bụ ụlọ ọrụ na - edenye aha ọtụtụ maka ijikọ ndị niile na - ere ụlọ na India. Ọ bụ ọchịchọ anyị na Ndepụta nke India iji mee ka ọ dị mfe ma dị mfe maka ịchọrọ ịchọta ma chọta ụlọ nke dị n'akụkụ niile India site na ebe nrụọrụ weebụ ndị ọrụ ụlọ anyị. Ndepụta nke India nwere ike inyere gị aka ịchọta ndị na-eweta ọtụtụ ọrụ achọrọ na azụmaahịa ụlọ. Ndepụta nke India nwere ụfọdụ aha ama ama na nsọpụrụ kachasị na ụlọ.
Mydatafeed.com . You nwere ụlọ ọrụ na-ere ala ma ị nwere ihe enyemaka nke na-agaghị dakọtara na ọnụ ụzọ ụlọ ị ga-achọ ịkpọsa? Anyị nwere ike were nri gị dị na ya, wee bido ya site na ngwa ntụgharị nri, wee zitere gị nri ịchọrọ. A ga-ezitere gị faili ntanetị gị n'ụdị URL maka izipu gị na ọnụ ụzọ kwesịrị ekwesị.
DataExport jikwaa data akụ maka ọtụtụ azụmaahịa; ndị na-ere ụlọ, ndị na-eme ka ụlọ ọrụ, ndị ọrụ ụlọ ọrụ buru ibu, ụlọ ọrụ ngwanrọ, ọnụ ụzọ ala, akwụkwọ akụkọ na ndị na-emepụta ngwa. Anyị ejirila ọtụtụ afọ zụlite ma jikọta usoro ngwanrọ na usoro nri ka ọnụ ọgụgụ na-aba ụba ọnụ ụzọ ụlọ, ụlọ ọrụ ngwanrọ na weebụsaịtị, na-eme ka usoro nri dịrị mmadụ niile mfe.
Nri Estate bụ ngwa ọrụ ngwa ahịa ebubata ngwa ahịa maka ụlọ ahịa UK na mba ofesi na ịhapụ ndị nnọchi anya ha. Anyị na-enye enweghị nsogbu, ọnụ ala dị ala, ihe ntụgharị maka ndị ọkachamara na-achọ ihe nwere ike ijikọ na akaụntụ Rightmove, Primelocation, OnTheMarket na Zoopla na-enweghị ezigbo njikwa saịtị ndị a iji aka ma ọ bụ n'adabereghị. Anyị na-enyere gị aka iwepu ọrụ na-ewe oge na nchịkwa nchịkwa ugboro ugboro site na ịnye ụzọ niile na-enyere gị aka ijikwa ma melite nkọwa akụ gị n'otu ebe, mgbe ị na-ebipụta ha na ọrụ niile ị na-eji.
xmlCombined na-ejikọta akụkụ niile dị mkpa nke njikwa akụ. Sistemụ Njikwa ọdịnaya (CMS) maka ebe nrụọrụ weebụ gị, Njikwa Mmekọrịta Ndị Ahịa (CRM), XML na-enyefe ọnụ ụzọ niile dị mkpa, ịkekọrịta ihe onwunwe na ndị ọrụ ndị ọzọ na mbubata. xmlCombined na-enyekwa mmelite Real oge maka ọnụ ụzọ na-akwado ya gụnyere Zoopla na Rightmove, na-enye gị nhọrọ iji gosipụta ngwa ọhụrụ gị na mmegharị ya ozugbo na ọnụ ụzọ mbata.
Ngwongwo Portal Nri ka emeputala ya nke ọma iji nyere ndị mmepe ụlọ na ndị na-ere ụlọ aka gburugburu ụwa na-ere ihe ha nwere ọtụtụ iri nde ndị zụrụ azụ na-efu nke ọma.
Reallyo.com Anyị nọọrọ onwe anyị ka anyị wee wepụta wepụta ma wepụta ndepụta ego mgbazinye gị na ebe nrụọrụ weebụ mgbazinye buru ibu nwere naanị otu ịpị gụnyere Apartments.com, Rent.com, Homes.com na ọtụtụ ndị ọzọ. Netwọlọ anyị Syndication nwere mepee ụzọ nnweta ụgbọ ala kachasị ukwuu na nke elele na ntanetị.
QuantaTec bụ ụlọ ọrụ weebụ na-ahụ maka nhazi na mmepe nke London, anyị na-ahụ maka inyefe raara onwe ya nye Ntanetị Weebụsaịtị, Ngwọta Ngwanrọ, Bochum Weebụ, Email Email, Ọrụ Nzuzo na Ntanetị ka ndị ụlọ akụ, ndị na-ahụ maka ịre ahịa na ụlọ ọrụ na - ahapụ ụlọ ọrụ - niile n'okpuru otu ụlọ!
RentLinx Mkpokọta weebụsaịtị na-eme ka ọ dị mfe ịgbakwunye ndepụta akụ gị na ọrụ ọchụchọ na weebụsaịtị gị. Hazie isiokwu anyị ka ọ dabara na atụmatụ nke saịtị gị ma jikwaa ihe niile site na RentLinx.
RealShout. Mfe na-adọta ndị ọzọ renters & homebuyer! Soro anyi banyere 15,000 ndị ahịa na-eji sistemụ mgbasa ozi RealShout na-ejikọ ya na ọtụtụ ndị na-ere ahịa na ndị na-akwụ ụgwọ ụlọ.
Data Prop bụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa dijitalụ nke na-elekwasị anya na ịre ahịa na ịntanetị. Usoro anyị bụ ịchọpụta ebe ndị na-azụ ahịa gị, ndị na-ere ahịa, ndị nwe ụlọ na ndị na-akwụ ụgwọ na-amalite ọchụchọ ha maka ụlọ ọrụ na-ere ma ọ bụ ihe onwunwe n'ịntanetị ma nye gị ọtụtụ ahịa ngwaahịa na ọrụ dijitalụ na-arụ ọrụ iji nyere gị aka iru, tinye aka na n'ikpeazụ ịgbanwe zuo ahia gi nke zoro ezo. Usoro ihe omume Prop na-enyere gị aka iweghara ndepụta otu oge wee mepụta mkpughe kachasị maka ahịa gị maka aha ahịa gị na ndetu site na weebụsaịtị anyị, ọdịnaya, ngwa ọrụ ọchụchọ, email, Portal ihe onwunwe na ọwa ahịa ahịa mgbasa ozi.
ezigboWW April 21, 2019
Nke a na ntinye e gwa ke Azụmaahịa Reallọ na tagged Ndepụta Syndication. Bookmark na Permalink.
July 1, 2017 Ndekọ Syndication Ndị Mmekọ nke RealtyWW Ama - Netwọlọ Mgbasa Reallọ Akụ WorldWide Iji hụ na ngosipụta kachasị nke ndepụta gị edepụtara na weebụsaịtị anyị sistemụ sistemụ na-ekesa ha ozugbo na ndị nchịkọta ụwa na ngwa ọchụchọ. N'okpuru, ị nwere ike ịchọta ndepụta nke weebụsaịtị ibe anyị: Claz.org bụ nchekwa data nchekwa. Mgbe ọnwa 10 mmepe na beta beta Claz.org dị ugbu a iji jigide ọdịiche dị n'etiti ndị na-azụ onwe ya na ndị na-akpọsa mgbasa ozi site na iwetara ọnụ nsonaazụ sitere na saịtị karịa 200 nkewa, mpaghara […] Ihe na Mgbasa Ozi Reallọ Ahịa
January 19, 2017 Ire Homelọ Site na Ndị Ọrụ Mgbasa Ozi Social Imirikiti n’ime anyị sonyere n’igwe mgbasa ozi na-elekọta mmadụ dịka Twitter, Facebook na Instagram iji wee soro ndị enyi na ndị anyị hụrụ n’anya nọrọ. Ebu ụzọ jiri mgbasa ozi na-elekọta mmadụ maka ikenye foto, vidiyo na ederede ederede na-egosi ihe na-eme. Agbanyeghị, nyiwe mgbasa ozi ọha na-eto eto nke ukwuu etoola ma ejiri ya maka ịkwalite azụmahịa na ụdị. Taa, ndị mmadụ na-eji atụmatụ ndị a eji ere ụlọ ha. Ndị na-akwụ ụgwọ ụlọ na ụlọ ahịa ejirila ohere dị na mgbasa ozi mmekọrịta […] Ihe na Mgbasa Ozi Reallọ Ahịa
February 4, 2019 Ntuziaka dị mkpirikpi: Ime ka Ebe nrụọrụ weebụ Reallọ Gị Dị Gaa nke Ọma Enwere ike iji ụzọ dị iche iche zụọ ahịa maka weebụsaịtị. Isiokwu a na-enye ozi gbasara ụzọ isi ere ahịa webụsaịtị ngwa ahịa. Mgbe i nwere webụsaịtị, ọ pụtachaghị na ị ga-ahụ ndị ahịa na-asọfe na ebe nrụọrụ weebụ gị iji chọọ ọrụ gị. E wezụga inwe weebụsaịtị, ịkwesịrị ijide n'aka na ịmeela weebụsaịtị ahụ n'ụzọ ga-eme ka ndị ọbịa bịa ma nọrọ na saịtị ahụ ka ha na-achọgharị maka ọrụ gị. Mepụta weebụsaịtị maka ndị na-akwụ ụgwọ chọrọ […] Ihe na Azụmaahịa Reallọ
February 6, 2017 Ngwaọrụ 6 kachasị mma E-azụmahịa maka obere azụmaahịa Ndị nwere obere azụmaahịa ugbu a nwere oge dị mfe na-eme azụmahịa ha n'ihi ọganihu nke teknụzụ. N'agbanyeghị na ha nwere mkpa dị iche iche, ijikwa ma hazie azụmahịa bụ ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma. Enwere sọftụwia e-commerce dị iche iche, nke a ga-adabara ngwaahịa na mmefu ego nke ndị azụmaahịa. Tupu anyị agaa n'ihu, ka anyị buru ụzọ chọpụta ihe onye ahịa nwere ike ịchọrọ. Mgbe ibido ilebanye anya n’elu ikpo okwu e-commerce, ị ga-ezute ndị a […] Ihe na Azụmaahịa Reallọ
Nwere ike 29, 2017 5 Kachasị Ego Azụmaahịa Kachasị Ego na Ohere na 2017 Ala na ụlọ yiri ka ọ bụ otu nnukwu ụlọ ọrụ ebe enwere ohere inweta azụmaahịa n'akụkụ ọ bụla. Ọtụtụ ndị nwere ụlọ ọrụ azụmaahịa a na-ekwupụta na enwere ọtụtụ ụzọ ịtụgharị uru. Nke a bụ ọrụ na-agbanwe agbanwe ịnwe n'ihi na ị nwere ike ịhazi oge gị ma nwee obi ike maka ịnweta ego ị na-enweta kwa afọ. Ndị a bụ 5 echiche azụmaahịa kachasị mma ụlọ ọ bụrụ na ịchọrọ itinye aka na ụlọ ọrụ a. 1. Joblọ ahịa gị bụ ka onye na - azụ ahịa n'etiti ndị na - ere ahịa na ndị na - azụ ahịa […] Ihe na Azụmaahịa Reallọ
September 9, 2019 Otu ụlọ ọrụ ụlọ na-erite uru site na Ọrụ Ndị Ọrụ Ọkachamara Azụmaahịa ụlọ na-asọmpi ike, ụlọ ndị na-enye uru bara ụba bụ ihe kachasị mma maka ndị bi n'ụlọ. Ọdịdị nke ihe onwunwe dị mkpa, mana arụmọrụ nke usoro ụlọ ahụ dịkwa mkpa. Ọtụtụ ndị na-akwụ ụgwọ ụlọ na-ebute ụzọ dị mkpa dị ka ọkụ ọkụ, okpomọkụ n'ime ụlọ, arụmọrụ ike, na nchebe ọkụ. Firmlọ ọrụ injinịa nwere ike inyere ndị mmepe aka imezi akụkụ ndị a. Otu ụlọ ọrụ injinịa ruru eru nwekwara ike inye aka na koodu ụlọ […] Ihe na Azụmaahịa Reallọ
June 29, 2018 Azụmaahịa Developmentforce Nke nwere ike idozi ya site na ngwa ọrụ Salesforce Dx Azụmahia bu igwe eji eme ihe eji eme ihe eji etolite igwe eji eme ka etolite ngwa ahia di iche. Egwuregwu a nwere ọtụtụ ọrụ iji nye ndị mmepe. N'ime ngwaọrụ ndị ahụ, ndị mmepe nwere ike ịhọrọ Salesforce Dx nke a na-ahụta dị ka ngwa toro ogologo na nke enweghị nkwado. Ngwá ọrụ a na-abịa n'ọtụtụ atụmatụ pụrụ iche na uru dị iche iche. Iji jiri ngwá ọrụ a n'ụzọ ziri ezi na iji nweta uru ya niile, ọ dị mkpa ịmata mmadụ ole na ole […] Ihe na Azụmaahịa Reallọ